7 Coupon Strategies I Nwere Ike Iji Tinye Aka Maka Ọrịa Na-efe efe Iji Mee Ka Ntugharị Ndị Ọzọ Dị n'Onlinentanet | Martech Zone
Nsogbu nke oge a chọrọ ngwọta nke oge a. Ọ bụ ezie na echiche a na-ada ụda n'eziokwu, mgbe ụfọdụ, ezigbo usoro ahia ahia bụ ngwa agha kachasị dị mma na ụlọ ahịa ahịa ọ bụla. Onwere ihe aka ochie ma nwekwa nzuzu karịa mbelata?
Azụmaahịa ahụ enweela oke ụjọ nke ọrịa COVID-19 butere. Na oge mbụ na akụkọ ihe mere eme, anyị hụrụ otú ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa si emeso ọnọdụ ahịa siri ike. Ọtụtụ mkpọchi manyere ndị ahịa ịzụrụ na ịntanetị.
Onu ogugu nke ulo ahia ohuru n’uwa n’ile n’elu ikpo okwu ya bu 20% n’ime izu abuo gara aga nke onwa March 2020.
Ọ bụ ezie na ịzụ ahịa ọdịnala na ịntanetị nwetara ihe dị egwu, ụwa dijitalụ jisiri ike ịlaghachi n'ụkwụ ya ngwa ngwa. N'ihi gịnị? Onyinye dị iche iche nke ego na koodu mgbasa ozi kwadoro ahịa maka nyiwe ecommerce. Storeslọ ahịa na-ere ahịa emeela ọtụtụ ihe iji nọrọ na mmiri site na ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke nkwalite na onyinye dị mma, nke na-eduga n'ịgba ụba n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, ihe ngwọta dị nchebe karị n'oge oke ọrịa ahụ.
Kedu ihe na-eme kupọns a kediegwu atụmatụ mgbake COVID? Na nkenke, ego na-enye ndị ụdị ohere igosi na ha na-echebara echiche mgbe ha na-erute ndị ahịa maara ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ karịa ego ha na-emefu.
Site na post a, Achọrọ m ịnye gị nlele anya na mkpọsa coupon kachasị dị irè n'oge oge ejighị n'aka na ahịa nke COVID-19 kpatara.
Nke a bụ mkpọsa mgbasa ozi kachasị elu m na-enweta maka ecommerce na-efe efe:
Kupọns maka ndị ọrụ dị mkpa
Zụta otu, nweta otu n'efu or abuo maka onu ahia otu (BOGO) nkwalite
Coupzụ coupon ugboro ole
Kupọns mbupu n'efu
Onye Mmekọ Kupọns
Mkpali na-akpali akpali
Budata Ntuziaka Kachasị Azụmaahịa Kupọn
Usoro 1 nke Coupon: Onyinye maka Ndị Ọrụ Dị Mkpa
N'etiti ahịa ahịa ọkụ na azụmaahịa BOGO, COVID-19 na-enyekwa onyinye ndị a na-ewu ewu na koodu CSR maka nkwado maka ndị ọrụ ụlọ ọgwụ na ndị na-aza ajụjụ mbụ (dịka ndị uwe ojii, ndị ọkụ ọkụ, wdg).
Adidas mere ya. Lenovo mere ya ka odi kwa. I nwekwara ike ime ya. Inye onyinye pụrụ iche na Kupọns maka ndị ọrụ dị mkpa n'oge ọrịa a na-eme ka ntụkwasị obi ndị ahịa na-eguzosi ike na ika gị sie ike ma mee ka ụlọ ọrụ gị bụrụ nhọrọ doro anya mgbe ị na-azụ ahịa. E wezụga uru dị iche iche metụtara ịkwalite iguzosi ike n'ihe ndị ahịa na CSR, ịnye azụmahịa maka ndị na-alụ ọgụ na ihu ihu oria bụ ihe kwesịrị ekwesị ime.
Mgbe m na-ekwu maka ụdị iguzosi ike n'ihe, enweghị m ike ịhapụ ikwu na ọrịa a gbanwere omume ndị ahịa gaa na uru bara uru karị. Nke a pụtara na ndị ahịa nwere ike ịhọrọ onyinye onye asọmpi ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị adịghị ma ọ bụ n'akụkụ ọnụ ọnụ. Nke a bụ eziokwu maka ụdị B2C na B2B. Ọ bụ ya mere ị ga - eji nwee nnukwu ndaba n'ịkwado ndị ahịa na ndị ahịa pere mpe na-abịa azụta n'aka gị. Onyinye a na-enye Coupon bụ nzọ dị nchebe karịa mkpọsa iguzosi ike n'ihe n'oge ọgba aghara dị ka ndị a.
Upbịakwute ihe mkpali na nnomi maka ndị ọrụ dị mkpa-naanị Kupọns dị ezigbo mma, mana njirimara onye ọrụ nwere ike ibute nnukwu nsogbu, dabere na akụ gị. Luckily, e nwere ngwaọrụ dị ka SheerID or ID.me nke ahụ nwere ike inyere gị aka n'ọrụ a. I nwekwara ike ịdabere na mbelata ego na ngalaba email dika Beryl, ụlọ ọrụ na-ekerịta ịnyịnya, mere maka mkpọsa ha COVID-19.
Coupon Strategy 2: BOGO Coupon Mgbasa Ozi iji Bibie Old Stock
N’oge nsogbu COVID-19, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-agba mbọ idobe shelf ha. Buyingzụ ụjọ, ịkọ nkọ na nsogbu ndị ahịa na-agbanwe mere ka nsogbu na ngwa ngwa ka njọ. N'ụzọ dị mma, mgbasa ozi coupon nwere ike ịkwụsị nsogbu nke ngwaahịa ochie na-ewere ohere ụlọ nkwakọba ihe. Mgbasa BOGO (Buy-One-Get-One-Free) ka bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na-enye onyinye oge.
Nkwalite BOGO bụ ụzọ magburu onwe ya iji bulie mkpali gị na-ere ma na-ere ma ọ bụ ịkwaga ngwaahịa ndị anaghị ere nke ọma na aka ha. Ọ bụrụ na oria ojoo a emee ka ụlọ nkwakọba ihe gị jupụta uwe eji egwu mmiri ma ọ bụ ihe ndị mara ụlọikwuu, ịnwere ike ịnye ụfọdụ n'ime ya n'efu maka iwu ụfọdụ. Mgbasa ozi BOGO na-arụ ọrụ nke ọma na uru kachasị dị mkpa achọrọ - ndị ahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ ntakịrị maka onyinye. Ezigbo mmeri. Na-echekwa na ụlọ nkwakọba ihe, na ọnụ ọgụgụ gị na-ebili elu ka ndị ahịa na-enwe obi ụtọ na ngwaahịa ha n'efu.
Usoro nke 3: Coupon dabeere na Frequency
Ọrịa ahụ kpatara ọgba aghara ma a bịa n'ihe banyere iguzosi ike n'ihe. Dika ndi ahia choro ka ichota ihe ndi ichoro ha nma, ndi ahia kwesiri ihazigharia ma obu jigide ndi ahia ohuru. Nọgide na uche nke ndị ahịa ma mee ka ha tinye aka na ogologo oge, ị nwere ike ịnye mkpọsa coupon nke na-abawanye uru na ịzụta ọhụrụ ọ bụla. Typedị ihe nkwado a na-agba ume ịmegharị ahịa site na ịnye ụgwọ ọrụ a na-ahụ anya maka ịzụ ahịa na ika gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnye 10% maka iwu mbụ, 20% maka nke abụọ, yana 30% maka ịzụrụ nke atọ.
Na ogologo oge, ị ga-echekwa banyere ịmalite usoro iguzosi ike n'ihe iji gosipụta ekele nye ndị ahịa gị bara uru.
Coupon Strategy 4: (Ọ bụghị nke ukwuu) Ahịa Flash
Ahịa Flash bụ ụzọ dị egwu iji hụ akara gị ma mee ka ndị ahịa zụta ngwa ngwa. Agbanyeghị, ị ga-eburu n’uche na COVID-19 mepụtara gburugburu ụlọ ahịa pụrụ iche ebe nkwalite flash anaghị arụ ọrụ mgbe niile n’ihi nsogbu na ngwa agha. Iji mee ka obi nkoropụ nke ndị ahịa gbajiri n'agbụ, ị nwere ike ịtụle ịgbatị ụbọchị mmebi ahịa gị. Nwekwara ike itinyekwu oge na mpempe ahịa gị iji nye ya ngwa ngwa (site na iji okwu dịka "taa" ma ọ bụ "ugbu a) iji kpoo ndị ahịa ime ihe. Thiszọ a, ị gaghị agbanwe ihe ị na-enye iji gwụ na oge akọwapụtara, na-ebelata ibu ọrụ nke ịkwalite nkwalite maka ndị ọrụ teknụzụ na ahịa gị.
Usoro 5 nke Coupon: Mbupu n'efu
You nwetụla mgbe ị tinyere ihe dị na ụgbọ ibu gị wee hụ obere ozi ahụ “Tinye $ X na iwu gị iji nweta mbupu n'efu?” Kedu ka nke ahụ si metụta omume gị? Si na m ahụmahụ, M na-ele anya na m Amazon ụgbọ ma na-eche, "Ok, gịnị ọzọ ka m mkpa?"
N'ebe a na-ewepu akpịrị na ntanetị nke ntanetị na-arịwanye elu, ịkwesịrị ileba anya na nook ọ bụla na ịchọta iji nweta uru ahịa. Mbupu n'efu bụ atụmatụ nkwado zuru oke iji nweta ụkwụ na asọmpi gị ma gbaa ndị ọzọ ume ntụgharị na nsonaazụ ahịa kacha mma. Ọ bụrụ na anyị nyochaa ihe a na-ebugharị na mbupu n'efu site na ọnọdụ uche, anyị na-ahụ na ụdị nkwalite a na-ekewa ndị ahịa n'akụkụ abụọ - ndị nwere obere ego na ndị dị elu. Ọ bụ ezie na ndị na-emefu ego na-ahụ mbupu n'efu dị ka nnabata kachasị mma, ndị na-emefu ego ga-achọpụta mbupu n'efu dị ka ihe ga-eme ka ụgbọ ala ha ruo ọnụahịa ebumnuche. Ihe aghụghọ dị na nke a bụ na ndị ahịa na ngwụcha nwere ike imefu karịa ka ha nwee afọ ojuju ịnata nnyefe ahụ n'efu.
E wezụga Kupọns ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ, ị nwere ike iche maka ịbịaru amụma dị mma karịa. Refeyim dị ka Amazon ma ọ bụ Zalando na-enwetarịrị obi ndị ahịa na ngwa ngwa na nnyefe n'efu, oge ịlaghachi ogologo, na mbugharị mbugharị n'efu. Y'oburu na ichoro inweta obi uto na akuko ecommerce na mberede, oru gi kwesiri ka o dota ndi ozo n'igwe ozo. You nwere ike hazie gị Kupọns dabere na nloghachi akụkọ ihe mere eme na-enye pụrụ iche amụọ ka mmebi-achịkwa-enweghị afọ ojuju ahịa ma ọ bụ kwụọ ndị na-alọghachighị ihe na a kara aka oge.
Usoro Coupon 6: Kupọns Onye Mmekọ
Ọ bụghị ihe ijuanya na ọrịa a na-efe efe bụ obere ihe ịma aka maka obere na ụlọ ọrụ na-ajụ ase nwere obere ntanetị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ị bụ ụdịrị azụmaahịa a, ịnwere ike ịgakwuru ụdị ndị ọzọ na-enye gị ngwaahịa ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma nye gị nkwado nkwupute na Kupọns maka ọrụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enye ngwa ntutu, ị nwere ike iru ụdị ntutu ịchọ mma ma ọ bụ ntutu ntutu.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na echekwara ụlọ ọrụ gị nsonaazụ ọjọọ nke nsogbu ahụike 2020, ị nwere ike ịgakwuru obere ndị ahịa ma nyekwa ha mmekọrịta. N'ụzọ dị otu a, ị ga - enyere obere azụmaahịa dị na mpaghara gị aka wee zụlite onyinye nkwado mara mma maka ndị na - ege gị ntị. Ọzọkwa, site na ụdị ụdị mkpọsa coupon a, ị na-agbatị azụmahịa gị site na ikpughere gị niche ahịa ọhụụ.
Usoro 7 nke Coupon: Kupọns enyi na enyi
Dika ndi mmadu na onu ogugu na-azu ahia na igwe ha, ha choro ka akuku nile nke njem ha di njikere. Kedu ka eziokwu a si jikọọ Kupọns? Ọ bụrụ na ị mụtala otu esi eji ozi nzaghachi na Kupọns, ọ bụ oge maka nzọụkwụ ọzọ - na-akwalite ahụmịhe mgbapụta coupon na koodu QR. Site na ịnye koodu na ụdị abụọ (ederede na QR), ị ga - ahụ na ego gị nwere ike ịgbapụta na ntanetị na ntanetị. Nke ahụ bụ ihe mbụ ị ga-eme ka gị Kupọns mobile-njikere.
E wezụga QR Koodu, ị nwekwara ike ịgbatị gị nnyefe nnyefe ọwa iji tinye ozi ederede na ịkwanye ọkwa. N'ihi gịnị? Ozi ịntanetị abụghị ụzọ kachasị mma iji jide uche ndị ahịa ozugbo ma kpalite mmekọrịta ngwa ngwa. Ọwa nnyefe na-ejikọ nke ọma na onyinye nke dabeere na geolocation na-enye gị ohere imeghachi omume na ọrụ onye ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ ngwa ngwa, dịka oke ihu igwe ma ọ bụ arụghị ọrụ.
E nwere usoro aghụghọ dị iche iche iji nyere gị aka ịkwalite usoro coupon gị n'ihu. Ebe ọ bụla ị nọ na ngbanwe gị dijitalụ, Kupọns nwere ike inyere gị aka ịhazi ozi gị, nwalee ọhụụ ọwa ọhụrụ, ma bulie ego nkwado na ahịa ọgba aghara.
Usoro ahia gị nke Coupon n'oge Ọrịa ahụ
Dika oria ojoo nke coronavirus mere ka ngbanwe di ka ihe di iche-iche di iche iche, omenala ndi mmadu kwesiri ka ha nwee nkwalite na-abaghizi uru. N'ime asọmpi ecommerce na-asọmpi COVID-19, ụdị ga-agafere iwelata ego iji dọta ndị na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ ma nyekwa ọnụ ahịa dị na ahịa ahụ nke onyinye yiri ya.
Usoro nlebara anya nke ọma echebere ugbu a maka ọtụtụ azụmaahịa ecommerce ma ọ bụrụ na ebumnuche ha na-adịkarị n'uche nke ndị ahịa. Site na mgbapụta mgbapụta ọnụego na-agbago na US na ụwa niile, akara gị ga-abanye na ikike nke iwelata. Mana ego ole na mkpọsa coupon ị kwesịrị ịgba ọsọ?
Isiokwu a na-egosipụta usoro mgbasa ozi coupon kachasị elu nke kachasị mma (na nke kachasị dị irè) nzọ n'oge nke enweghị mgbagwoju anya ahịa - site na Kupọns maka ndị ọrụ dị mkpa, nkwupụta mbupu n'efu na ahụmịhe-njikere coupon ahụmahụ. Ebe ọ bụla ị nọ ugbu a na njem mgbanwe dijitalụ gị, Kupọns nwere ike inyere gị aka ịhazi ozi gị, nwalee ọhụụ ọhụụ ọhụụ, ma bulie ego nkwado na ahịa ọgba aghara.
Tags: bogo Kupọnscoupon azumKupọnsCOVID-19flash ire KupọnsKupọns ugboro olenyefee ntughari na ntanetịKupọns ekwentịmobile-enyi na enyi Kupọnsọrịaibe Kupọnspost-ecommerce Kupọnsnyegharịa
Ọkachamara Ọzụzụ Ọdịnaya nwere ahụmịhe na ahịa dijitalụ. Onye gụsịrị akwụkwọ na nso nso a na American Studies na English Culture. Ahụmahụ na-arụ ọrụ na gburugburu SaaS asọmpi. N'iji ihe niile mara ahịa, nyocha, na ịkwa akwa teknụzụ ọhụụ dị ala na usoro azụmaahịa. Onye ederede B2B nwere mmasị maka ndị na-ege ntị dị iche iche, gụnyere ndị mmepe, ndị na-ere ahịa, na ndị isi, yana ọtụtụ akụ - weebụsaịtị, edemede, ọmụmụ ikpe, edemede vidio, na ndị ọzọ. Ugbu a na-arụ ọrụ maka Voucherify.io, na-emeso atụmatụ ụlọ ọdịnaya, ire vidiyo, na SEO. Na nzuzo, onye na-egwu egwuregwu vidio, akụkọ edemede, na ọmụmụ veganism.